ရင်သားကုသမှုဌာန - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
Breast Center, 3rd Floor
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၃၀၄-၅
ဆေးရုံခွဲတွေအားလုံးမှာ အမျိုးသမီးများရဲ့ ကျန်းမာရေးဟ အမြဲပဲ ထိပ်တန်းဦးစားပေးနေရာမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရင်သားအခြေအနေ အမျိုးမျိုးအတွက် ရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနဲ့ ကုသမှုခံယူခြင်းစတဲ့အဆင့်တွေ လုပ်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသမီးလူနာတွေဟာ အကောင်းဆုံးဆိုတာနဲ့ ထိုက်တန်သူတွေလို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေဖို့အတွက် ရင်သာကင်ဆာရောဂါကို အစောဆုံးအဆင့်မှာတင် ကြိုတင်သိရှိလိုက်ပြီး ပြန်လည်တိုက်ထုတ်ပေးဖို့ရာအတွက် ရရှိနိုင်သမျှ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်သားကုသမှုဌာနမှာ ပုံမှန် ရောဂါစစ်ဆေးရှာဖွေဖို့အတွက် ခေတ်အမီဆုံး ရင်သားဓါတ်မှန်စက် (mammography)၊ တီဗီဓါတ်မှန် (ultrasound) နဲ့ သံလိုက်ဓါတ်မှန်စက် (MRI) စတဲ့ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အပြင် ထပ်တိုးစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် အသားစယူစစ်ဆေးမှု အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းကိရိယာတွေဆိုတာဟာလည်း ဒါတွေကို အသုံးပြုဖို့အတွက် အမှန်တကယ်ကို အဆင့်မြင့်စွာ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမရှိခဲ့ရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အသုံးမဝင်ဘဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ Samitivej မှာ နိုင်ငံတကာမှာအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာပါ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံး အထူးကုသမားတော်တွေနဲ့ သူနာပြုတွေကိုပဲ ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ကဏ္ဍမှာ JCI အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Samitivej ကို ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်သူဖြစ်စေတဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်မှုအဆင့်တွေအတိုင်း အမြဲပဲထိန်းသိမ်းထားဖို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က အာမခံပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း
ရင်သားကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားအခြေအနေအားလုံးအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
ရင်သားအသားစယူ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆန်းစစ်ခြင်း
ရင်သားဓါတ်မှန် (mammography) နှင့် တီဗီဓါတ်မှန် (ultrasounds)
ရင်သားသံလိုက်ဓါတ်မှန် (MRI) စက်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆန်းစစ်ခြင်း
ရင်သားဓါတ်မှန် (Mammography) ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ
ကင်ဆာပျံ့နှံ့ကြောင်းပြသော ပထမဆုံးပြန်ရည်အကျိတ်ကို အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း
သေးငယ်သော အပ်ဖြင့် အသားစယူစစ်ဆေးခြင်း
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၇:၀၀ - ၂၂:၀၀
၆၆ (၀) ၂၄၃၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၄၂၂၂
Tanya Kajornrattana, M.D.
Assist. Prof. Suthep Wanitkun, M.D.
Associate Professor Pavit Pienvichit, M.D.
Worraporn Tantichattanon, M.D.